Hetra avy amin’ny Fer : 10 miliara Ar ny hanarenana ny lalana eto Iarivo | NewsMada
Hetra avy amin’ny Fer : 10 miliara Ar ny hanarenana ny lalana eto Iarivo
Hikojakojana ny lalana eto amintsika ny hetra avy amin’ny solika (Fer) aloan’ireo mpandraharaha mpaninjara solika. Anisan’ny natao laharam-pahamehana ny eto an-dRenivohitra, ary maro koa ny laharam-pahamehana hafa.
Iaraha-mahita fa mandeha tsikelikely ny fanarenana na fikojakojana ny lalana eto Antananarivo Renivohitra. Anisan’ny tena nampitaraina hatry ny ela nefa amboarina ankehitriny ny eny 67 ha, mitohy koa ny etsy Andravoahangy manoloana ny sekoly Sainte Antoine, ny eo amin’ny fihodinan-dalana (rond point) eo amin’ny paositra, ny eny Ankadimbahoaka Soanierana, sns.
Tsy avy amin’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena na tetikasa manokana ny hanaovana azy ireny, fa efa voafaritry ny lalàna ny Tahiry hikojakojana ny lalana (Fer). Manodidina ny 10 miliara Ar ny natokan’ny Fer hikojakojana ny eto an-dRenivohitra, avy amin’ny hetra aloan’ireo mpandraharaha mpaninjara solika. Niaiky anefa ny Fer fa tsy ara-potoana ny fandoavan’ireo mpandraharaha ny hetrany, fa na izany aza, afaka nanome aina vao ny fikojakojana ny lalana ny vola azo.
Aiza ny mangaraharaha amin’ny “marchés publics”?
Tafiditra ao anatin’ny sokajina tsenam-barotra an’ny fanjakana (marchés publics) ny fanomezana ny orinasa hanao ireny fotodrafitrasa an’ny vahoaka ireny. Manara-maso ny fanatanterahana azy ny Fahefana mandrindra ny tsenam-barotra an’ny fanjakana (ARMP). Hatreto, tsy misy antontanisa ofisialy navoaka ny fomba nanomezana ny orinasa tsy miankina ny tsena, amin’ity fanamboarana na fikojakojana ny lalana ity, na tokony hisy aza izay rindran’asa izay avy amin’ireo rafi-panjakana manao azy sy manao tatitra any amin’ny ARMP, ohatra. Miezaka manentana sy mampahafantatra ny lalàna ny ARMP ankehitriny, ary ho hita eo raha hanaraka na minia tsy mahalala ny rafi-panjakana voakasika. Volam-panjakana ny hanaovana ireny fotodrafitrasa sy fanomezana tsenam-barotra an’ny fanjakana (ao anatiny koa ny tolotra ara-tsaina) ireny, ka manara-maso akaiky ny mpamatsy vola iraisam-pirenena, satria tafiditra ao anatin’ny fanatsarana sy fanarenana ny fitantanan-draharaha sy ny volam-panjakana ary ny ady amin’ny kolikoly ny fisian’ny mangarahara amin’ity sehatra ity.